Akụkọ - Gini bu Electrodes di ike?
Gbado ọkụ electrodes bụ waya wires na n'ụdị na chemical coatings. A na-eji mkpanaka ahụ akwado arc ịgbado ọkụ ma nyekwa igwe njupụta achọrọ maka njikọta ahụ. Ihe mkpuchi ahụ na-echebe metal ahụ ka ọ ghara imebi emebi, na-eme ka arc ahụ dị ike, ma na-emezi weld. The dayameta nke waya, obere mkpuchi, na-ekpebi nke nke ịgbado ọkụ mkpara. E gosipụtara nke a n'ime irighiri ihe nke anụ ọhịa dị ka 3/32 ″, 1/8 ″, ma ọ bụ 5/32. ” Obere nke dayameta pụtara na ọ na-achọ obere ugbu a ma ọ na-etinye obere ego nke ọla nchara.
Basedị nke isi metal a ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ usoro na igwe, na ọnọdụ ndị ọzọ na-ekpebi ụdị ịgbado ọkụ electrode. Dịka ọmụmaatụ, obere carbon ma ọ bụ "nchara nchara" chọrọ mkpanaka nchara ígwè dị nro. Gbado ọkụ ígwè, aluminom ma ọ bụ ọla na-achọ dị iche iche ịgbado ọkụ mkpara na akụrụngwa.
The agbanwe agbanwe mkpuchi on electrodes na-ekpebi otú ọ ga-eme n'oge n'ezie ịgbado ọkụ usoro. Offọdụ ihe mkpuchi ahụ na-ere ọkụ na ọkụ ọkụ a na-ere ọkụ na-ese anwụrụ ọkụ ma na-eme dị ka ọta gburugburu "ọdọ mmiri" ịgbado ọkụ, iji chebe ya pụọ ​​na ikuku dị gburugburu ya. Akụkụ nke nfegharị ahụ na-agbaze ma gwakọta ya na waya wee sụgharịa adịghị ọcha ahụ n’elu ala. A maara adịghị ọcha ndị a dị ka “slag.” Weld emechara ga-abụ nke na-emebi emebi ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ntụgharị. Mgbe welded nkwonkwo na-mma, ndị slag nwere ike wepụrụ. A chipping hama na waya ahịhịa na-eji ọcha na-enyocha weld.
The electro-aak ịgbado ọkụ electrodes nwere ike na-grouped dị ka iferi electrodes, ìhè ntekwasa electrodes, na echebekwa aak ma ọ bụ arọ ntekwasa electrodes. Useddị ejiri dabere na njirimara ụfọdụ akọwapụtara nke gụnyere: nkwụsi ike nke corrosion, ductility, ike dị elu dị elu, ụdị nke ọla igwe a ga-agbanye; na ọnọdụ nke weld ahụ dị mbadamba, kwụ ọtọ, vetikal, ma ọ bụ n'elu.